Sina: Io àry! 77 yuan isam-bolana ny hofan-trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2011 15:44 GMT
Mba hanehoana ny fijeren'ny CCP (Antoko Kaominista Sinoa) ny fiainan'ny olon-tsotra, dia nandefa ny fitsidihin'ny Filoha Hu Jintao ny fianakaviana kely fidiram-bola tao Beijing tamin'ny 30 Desambra taona 2010 ny fandaharan'ny tambajotram-baovao CCTV. Na izany aza, ny fifampiresahan'ny Filoha Hu sy i Guo Chunping, solotenan'ireo mponina kely fidiram-bola, eo amin'ny toerana ahitana trano azo ipetrahana, dia niteraka firehetana vaovaon'ny hatezeran'ireo mponin'ny aterineto tamin'ny fiandohan'ny taona.
Hofantrano 77 yuan isam-bolana
Nadikan'i Shanghaiist haingana ny resaka :
Hu: Oviana ianao no nifindra?
Guo: Efa ho tapa-bolana izao aho no nifindra.
Hu: Oh, tapa-bolana, hay. Hoatry ny ahoana ny haben'ny trano?
Guo: 45 metatra tora-droa izy rehetra.
Hu: 45, hay. efitra roa?
Guo: Eny, efitra roa.
Hu: Hoatrinona ny hofany alohanao amin'ity trano ity?
Guo: 77 yuan isam-bolana.
Hu: 77 isam-bolana –vitanao ve ny mandoa hofan-trano ara-dalàna?
Guo: Eny, Sekretera-Jeneraly, te-hisaotra betsaka ny antoko sy ny governemanta ny tenako. Nanohina be anay ny fanomezana ity trano tsara ity honenanay!
Hu: Tena mijery ny fiainan'ny olona andavanandro ny antoko sy ny governemanta. Nandray fepetra maro izahay mba hanatsarana kokoa ny fiainanao andavanandro. Eny ary, faly izahay mahita fa nihatsara ny fiainanareo!
Guo: Misaotra! Misaotra! Tena mivoatra isan'andro isan'andro ny firenenantsika. Tena tsy mba sahy akory nanonofy izahay hoe hiaina anatina trano tena tsara toy izao izany izahay indray andro any.
Raha mitaraina mikasika ny haratsian'ny trano fonenana ny olona, dia niteraka resa-be narahan-katezerana kosa etsy andanin'izany ny tantara mitohin'ny “hofantrano 77 yuan isam-bolana ny 45 metatra tora-droa” eo amin'ny olona izay miady mafy amin'ny fiainana eo an-tanàna. Mba ho fnehoan-kevitra amin'ilay fampielezan-kevitra, dia nanao sary lehibe mananihany maneho ny saran'ny hotely China Dynasty, ny tena mora indrindra i Onion cartoon:
Ny fanohanan'ny governemanta
Ny fanontaniana voalohany apetraky ny mponina amin'ny aterineto dia hoe azo atao ve sa tsia ny hahita trano mora hoatri'zany ny hofany eo amin'ny tanàna izay ahitana olona mandoa hofantranonà 200 yuan isam-bolana ho an'ny efitra fandriana. Longer, mponin'ny aterineto , na izany aza, dia manatsikafona ny fitsipika sasantsasany mifandraika amin'ny fanampiana omen'ny governemanta mikasika ny trano fonenana ary mahita fa tena mety hiseho ihany izany:
Raha manome fanampiana 40 yuan isaky ny metatra ny governemanta dia ho 1800 yuan ny 45 metatra tora-droa amin'ny trano. Na izany aza, ny fanohanana ambony indrindra dia 1500 yuan, azontsika ambara izany fa nomen'ny governemanta vola 1500 yuan isam-bolana ny fianakaviana Guo raha toa ka mihofa 1577 yuan ny tranobe tsara ipetrahany hany ka 77 yuan sisa no aloan'ny fianakaviana Guo isam-bolana.
Ny fanontaniana manaraka izany izao dia hoe iza no manaraka hahazo ny fanampiana ara-tranon'ny governemanta? Ilay mponin'ny aterineto Renrou avy amin'ny MOP (lahatsoratra nofafàna) dia mitady hoe iza marina moa i Guo Chunping ary nahita fa mpiasam-panjakana izy amin'izao fotoana izao, miasa eo amin'ny departemantan'ny polisy an-dalambe any amin'ny Distrikan'i Chaoyang any Beijing. Raha ny hevitry ny manodidina azy, dia tsy mipetraka akory ao amin'ilay trano ny fianakavian'i Guo. Fanampin'izany, mnatsikafona ny rahavavin'i Guo ihany koa ireo mponin'ny aterineto eo amin'ny rakitsary amin'ny aterineto (nesorina daholo ny sary rehetra) hanehoana fa tena olona manana mihitsy ny fianakavian'izy ireo, toy ny tranga iray hoe ny zanany vavy nitsidika firenena maro tany ivelan'i Sina.
Nalain'ny gazety,Southern Metropolis, teo an-toerana ny tantara, ary navoitrany fa misy olona roa manome ny fianakaviana Guo, reny tokantena miaraka amin'ny zanany vavy izay mbola mianatra any amin'ny anjerimanontolo, ary amin'io tranga io raha toa ka latsaky ny 1160 yuan isam-bolana ny fidiram-bolany, dia voafidy hahazo ny fanampiana avy amin'ny governemanta izy.
Voasakana ny firarian-tsoan'ny taom-baovao
Na dia tsara daholo aza ny pitsopitsony rehetra, dia diso miala loatra amin'ny traikefa iainan'ny olona ilay fampielezan-kevitra, ny “marina” asehon'ny CCTV tena dia mbola mitoetra ho tsy mandresy lahatra sy mampihomehy. Tao anatin'ny andro vitsy lasa izay, firarian-tsoa ho an'ny taona 2011 mahatsikaiky no nandeha nanerana ny bilaogy madinika sy ny finday :
77 Yuan ny hofantrano isam-bolana any Beijing, 11.2% ny fiakaran'ny karama, 99.13% ny tahan'ny mpianatra miasan'ny avy eny amin'ny anjerimanontolo, ny mpiasan'ny governemanta mandany andro sy alina maro mianatra ny “Haja valo sy ny Henatra valo” (“Eight Honors and Eight Shames”), mandoa vola eo amin'ny salany 2-3 yuan isan-tsakafo eo ny mpianatry ny anjerimanontolo. Manana nofinofy aho: miaina mandrakizay ao amin'ny tontolon'ny vaovaon'ny CCTV .
Araka ny ambaran'i Zhongnanhai, tsy mikasika ny fianakaviana Guo ny firohotan'ny mponina amin'ny aterineto:
Mikasika ny fihetseham-pon'ny olona mikasika ny voavao ofisialy tamin'ny televizionam-panjakana ilay izy. Tsy fambara tsara ho an'ny Antoko Kaominista izany raha toa ka haratsiana sy tebahan'ny mponina ny vaovao ahitàna ny Filoha, eny fa na dia vao amin'ny aterineto fotsiny aza aloha izany ankehitriny. Tsy maintsy mila mahay mandresy lahatra kokoa ny governemanta izao amin'ny fampielezan-keviny, indrindra amin'ity fiaraha-monina sarotra takarina sy mifandrohy be ity.
Na izany aza, mbola mijanona ho henjana ny milin'ny fampielezan-kevitra miaraka amin'ity karazan'adihevitra sy fifidianana ataon'ny olona ity. Ankehitriny, nesorina tamin'ireo bilaogy madinika sy ny seha-pifaneraserana mihitsy ny fiteny hoe”77 yuan isam-bolana ny hofantrano” （月租 77）, raha toa kosa ny fomba fiteny hafa sasany mbola hita amin'ny alalan'ny twitter :
Vao avy niantso ahy mihitsy ny reniko. “Nilaza ny vaovao nalefan'ny tambajotra CCTV fa 77 yuan fotsiny ny hofantrano any Beijing. Nefa ianao milaza amiko fa mihoatra ny 1000 yuan ny hofantranonao. Taiza izany no nandanianao ny volanao?” Hoy aho namaly: “Dia mino izany zava-poana izany ve ianao? (famaliana mitovy amin'ny hoe”Iza no niteny an'izany.”).
Miatrika zava-misy tsy mitovy ny olona: ny sasany mandoa 77 yuan isam-bolana, ny sasany mandoa 77 yuan isan'andro.
Marina aloha fa ny trano ngeza tsara dia mihofa “77 yuan fotsiny isam-bolana”. Fa fotsiny hoe ianao aloha dia tsy hahazo izany karazana tombontsoa izany. Ho an'ireo izay afaka hahazo izany, tsy mipetraka ao aminy akory. Ampanofainy ilay izy. Izay no marina. Mitomania mafy araka izay tratranao.